gabaygaan waxaa tiriyey hadraawi. Ayaamii murugadiyo Maalmii noloshee adkaa Mushkiladii aan galee Mar iyo labo aan ahayn, Dhibtaad ila soo martee. Hadraawi waa ninka keliya ee Somali soo maray ee aan weli lagu arag isagoo qof ama dad ku maagaya maanso ama gabay,marka laga reebo keligii taliyihii. Abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi#hadraawi#abwaan#somali# murti#suugaan#gabayo#gabay#xigmad#af soomaaliga#.
Author: Tabei Kajikasa
Bal tafeenahaygiyo Taagtayda milicsada Aniguba tib culus iyo Tukubaan cuskanayaa Kuma taagni lugahee Haygu tiirsan Laangadhe Hadgaawi kalay ka taabteen Ninkii taarta Libaan Uma tooggo qumiyee Ma tix gelin dhegoolee Talan taalli laafyaha Cag jiidka taran tari Wax la yidhi tin caarow Looxa waad ku taallaye Haddii Alifki kaa tiray Ta’da yaa u magac dhaban?
Immisaan ku jiri baaq Heestii ukulidiyo Cabashiyo abla-ablayn?
Iimaan sed weeyee mid haddaad saluugtana saddexdaba bal iga hoo. Fadalkaa la wada gurey Garo oo barbaarkii Gebgebtiyo is waalkii Wuxuu guudka kaga dhacay Hal fadhida gelgelin Sow ka sokaysa geedkii Qosol guuli keentay Hayn weydey gabadhii Isaguna gilgilashada Gebi dhaca is yidhi toos Misna gudub u soo ciir Gabaxdii is qaban waa Gadhka ciidda kula duul Show illayn gardaadkiyo Garab gabayadda shanshaa jaban Jaljalleecday gegiduu Ku burburay geyaankeed Laye Guud-haldhaaley Garangarisay laafyaha Isna gocasho sii dhawr Baalal goof ku yaalliyo Indha gudhay ka daba tuur Dabadeed galgalashada La gurguurey boodhkii Gawdiidsey meeshuu Salka dhigey go’doonkii Ku wadh wadhay gabaahiir Waxa hodey garaaraha Golxadiyo cabaadhyaha Goobtaasi hadal ma leh Goolkaasi dhalan waa Guurkaasi beenow Gabow baa da’ mehersaday Gurey baan xusuustee Gobor iyo turxaan iyo Ninku gaatir badanaa Qudhun buu far geliyaa Marka gacal la yaabuu Guudkiisa mariyaa Gaarriyow ma naagtii Loo maydhay gacantiyo Gambadii la sheegiyo Gabaygii la tiriyaa!!!
Wuxu yidhi “degmadayada Dugsi keliya baa jira Diric keliya baa hsdraawi Dersi baanu baranaa Dulliga iyo beentiyo Doqonniimo faankiyo Qoqobkiyo dirsociyo Ducadiyo yaboohdiyo Inta laga diqoodiyo Dawersigu ka kow yahay Digashadu u mudan tahay Marka qalin daraalaha Dilla sheega la cuskado Intixaanka hafraawi dego Ka dul dhiga jawaabtiyo Doorkiyo wax-garadkaaa Gabayadx daadataa u badan” Wuxu yidhi “degmadayada Dibnahaa la cunayaa Qosolkaa la deexdaa Adigoo il dabayaa Dadku inaanay kaa garan Misna lagu dedaalaa Marka aad Duleedow Sidaad doonto weydaad Sidaad diiddey yeeshaa” Wuxu yidhi “degmadayada Si dareenka garashadu Aanu nooga noqon duug Dawrigaan hayin ahayn Ma dagmaha indha qaba Tiisa waw daboollaa Waanu daadahaynaa Wuxu daymo boganlaa Dulmar bay ku gaadhaan.
Heedhee Sahraay heedhe Saran seerka jiilaalka Surbacaadka jaahweynta Sumal-haadka roob waaga Iyo solanka daaduunka Cirka oo sabaad guurey Dhulka oo huwadey siigo Ahdraawi dogobbo soogsoogan Marka beladu sooyaanto Saadaashu beenowdo Saca nuguli kaa leexdo Adna sebenka raac maaha. W Salka dhiga guryaa seexda.
Qoqobbada dhex yaalliyo Tolow qalada yaa baray? Aday dani kuu dhantahay Axmedow nin dheeraad sitoo dhiibsan baad tahay Tukalaad u dhaaftaa kolkaad dhaliso tii roone Dhalintii caleemaha lahayd waygu dheertahay Dhawr iyo shan dhawr iyo haddana dahwrarba jiraa Haddaan beegsi kala soo dhexbaxay, tooda meel dhigay Labadii dhallaanimo lahayd ways dhar urisaa Berberaawi dhuub iyo ka dhuub waysu dhurannaa Ilhaamay dhiggaagiyo hablaha dhuude falanqee Hadduu dhaguxu kala hayb tirsado dheemman baad tahay Suugaantu waa dhaqan haddana waa sud iyo dhiib Dhidib iyo lud bay leedihiyo dhaabad iyo meel Dhuuxuu ka hadraaiw ninkii dhilan yaqaanaaye Qofba waa dhankuu ka arko iyo meesha uu dhigo Dadka dhiiri iyo qawl sanbaa lagu dhacsiiyaa Sida loo dhahaabu khalqigu ugu dhegtaagaa Dhunkaal iyo xajiin lama marshiyo dhuumatiyo sheel Sida dhuuni qaataha murtida looma dheehtiro Dhiidhiga nin laasimay hadduu dheegto waa halis Dheeldheelligaa laga jiraa waa la dherersha Dhexrooriyo waxa lagu hojaa weliba dhaad dhaad Dhoomaha waxaa laga xushaa teeda dhumucweyn.
Naftiisa qofkii dulmiyey Miyaan axan loo yaboohin, Rabbow dunidaada weyn Geel hadraaai irmaan iyo Gabno iyo candhooliyo Madi guuto deeqdiyo Gaaniyo horweyn iyo Awr goola wadannoo Gaban daadahaynoo Gallad ciddi ku qabinoo Lala gelin hadhuubkoo Geedaha aqoonnoo Garow loo bisleeyoo Geeslow Biciidkiyo Garanuugta seenyoon Loo soo gabraaroo Misna guul-darraystow Ganac loo wardheeroo Cidi gaadhi weydoo Ninna goosan gavayada Dhaqankiisu gaar yahay Waa xaal gurracanoo Gurranoo la yaablee Waxaan uga hxdraawi leeyahay Ruuxii gartow sheeg.
Wax la hado shil bay roon Wax la helo lib bay mudan Wax la huro naf baw culus Wax la hubo wed baa jira Senge hoohadaa baxay Habaqlaa ka daba tegey Inkastay habaaskiyo Ka dhergeen huq iyo hadrsawi Hafashada asqoobeen Boqol jeer hungoobeen Weli way handanayaan. Gooli baadhka sheekada Haasaawe goo goo Hadalkii gar adag iyo Gendel iyo alool saar Hadba garagar oodee Hadba gooddi kala bixi Galka ulo ku baadh baadh Goobyaalka inantii Garan weydey baanuhu Geesuu u dhacayoo Waxay tidhi geddaa hadal Aan is guursannuu yidhi Alla yay gujay tidhi Ahdraawi hadduu gedmado hadal Goobta waan ka dheelmaa Ayay gabahada tidhi” Wuxuu yidhi god bay hadhay Waxay tidhi Gadh Cawsow Adhigaa galbanayee Aan gadaal u soo rogo” Isna yidhi ka gaadhsii Guusha maanta kuu dagan God-dalooladiisiyo Guga faraqa haystiyo Gedihiisa qari yidhi Ganbaraashka sii luud Gabayaea buu ka jaray qodax Geed kaluu ku soo mudey Gabbashada ku soo noqoy Ku soo laabey goobtii Gabadhiina ugu gabayads.
Heedhee Sahraay heedhe Sarta hilibka dheehaaga Samaydaada dhererkaaga Sarajooga muuqaaga Sanqaroorka jaahaaga Dahab iyo xariir saran Uma baahna saantaadu Hadda silis ha xidhan maaha Luquntana ha hsdraawi mahaa Waxan uga socdaa heedhe Marka aad sunuud hayso Waxa suuq mug-weyn yaalla Ha la simin kitaab weeye. Gudub magacu waa gabayda Galbay oo la wada maqal Dunidoo dhan wada gaadh Gabdhihiina loo sheeg Iyadaan god loo deyn Gibishay I saareen Geestee u duubaa? Uub baad ku jirtaa qarsoone, 2. Sections of this page.
Bahalow Shabeellow Hoy bara baraalow Waaryaa nin buureed Bulsho gabayaxa ku leedahay Beryahaagan ka horow Bahda habar-dugaag yahay Marka ay biciidkiyo Koran buuran loogtaan Inta boodhku qariyaa Waxba yay badhkoodiyo Helin bawdo hiliblee Kolay biixii ruugaan Marka biidhi-qaatiyo Qawluhu is-boobaan mid afkii ka buux samay wax ka bililiqaystaan badanaa ma qadi jirin raqda baallaheediyo badka kama maqnaan jirin saw tan Buulalleydii ku bakhtiday ag-taadii.
Waxaan dooddi kaga baxay Hdalkana ku daa idhi Nin dab liqay Rashiidow Dhuxul buu ka daacaa Ma darmaanta booddee Didday baan u jeedaa?
Daawo abwaan Maxamed Warsame Hadraawi
Anigu kugu faani maayo, Inkastoo guddoonkii burburay, loo gudcura joogey Inkastoo go’aankii dulliga, geesinnimo diiddey Inkastoo giyigu waa xormee, gaadhka lagu meershe Inkastuu gaggaabkii cuslaa, garangar duul duulay Xaajada god-raaca leh haddii, loo gabbala eego Sida ay u kala geysan tahay, way gun dheertahaye Kol haddaan garaad lagala hadhin, galabba sheeggeeda Inta maanku gaajeysan-yahay, guuli waa weliye.
Maxaan geystay oo dhimay? Wuxuu ugu hiiliyaa ninka laga gar daran yahay iyo ninka la dulmiyayo. Mise wuxuu taraarkii kala dhacay Tabciyo Sheekh? Burrusow Dameerow Biyo ceel ma keenow Hadba dhaan ku biirow Beelaha aroorka ah Iska daba boqoolow Bulsho waxay ku leedahay Geela baadi soocdiyo Sumaddiyo birqaabka leh Boodaanta wada xidhan Meeyey baarqabkiisii Baqal looma tu’iyee Yaa baacso kugu yidhi?
Islaam la dagaalka ah Nin ku yidhi sinnaan mayno Adna buri sarrayntiisa Sidka waa wadaagtaane Ma sagaashan baa tiisu. Haddaanay astaan lahayn, Dayaxa School Education Website. Inan sabadu duugoobin Sayax iyo ugbaad waayin Sudda iyo degaankaagu Surmi iyo harraad leeyan Ama saacu guur-guurin Sohda ceelku dheeraannin Adaa yeeli kara saasba.
Dhillowyahankan geedkii Lagu beeray dhiiggiyo Dheecaanka wadhatada Dhexda tolow iskaga maray Dhirta maw abtiriyaa Sida dhalashadeediyo Dhaqankeedu kala hadarawi Gabay waa mullaaxoo Mergi weeye leexdoo Adigoo midhcaanyiyo Maygaag u jeedaa Moxor loogu dhuuntaa Micnahaan gurracayaa Xaalku waa maqaar saar Midho gabayadz haddaad tahay Maar baan shillalayaa Marso aanad geyin baa Hal-qabsigu i mariyee Gaarriyow miliilica Marba daad rogmanayaa Igu soo mir kacayee In yar Maxamed ii noqo.
Salfudaydku Xaawuu jannadii ka saaree ruuxaad sugaysoo maqan waa la saadshaa sahan waa la dhowraa.
BBC Somali – Maqal iyo Muuqaal – Daawo abwaan Maxamed Warsame Hadraawi
Isaguna guddoon yiri, laysu guud mar toyashada caanaha gadhoodhaa inay guura-guuraha weelka gaararkiisiyo gunta badi ku ururaan waa ged lagu yaqaannee, godankii isugu tage. Haddaan doogga cawskiyo deegaantu saarayn dhulku duug ma yeesheen dihaal mareebeen qofna kuma daneysteen Rabiyow dushiisoo, dunidaada eebow adigoon cid dirranbaad todobaad ku dadabtoo iyaddoo dambarisoo sida doonan gabadheed inta timaha loo dabey dunta lugu afmeershaa laga furey daboolkoo dalagkaad ku beertaa ninba weel darsanayaa.
Oda lama filee Afti iyo haddii Ergo loola tago Tolow aabbaheed Muxuu odhan lahaa? Dalaal iyo been madow Badbaado qof doonayow Hadduu dhaashto jiilaal Ama dhiibsho laamaha Naxariis la kala dhaco Dhardharraanta quruxdiyo Dhaaddanaanta liqanyada Si kaluu u dheegtaa. Hadraawi hal-abuurnimadiisu waa iftiinka xilliga mugdigu saameeyo umadda, waa ileyska lagu hirto marka dulmigu uu xaqa hadheeyo,waa mid ka talisa aayaha ummada Somaliyeed, waa kala hagga ummada Somaliyeed, xagkasta oo la eego, hadday tahay laba jacayl lagu kala furdaaminayo iyo gabxyada dagaallagu kala dhaqaajinayo,laba gar loogu naqayo, laba wax qaybsanaysa oo loogu kala saami tuurayo, qof wax dulmiyaya oo loo sheegayo waxa uu qaldaayo,dhinnac kasta oo ummadu ka jilic san tahay hal-abuurnimadiisu way ka soo gashay.
Dhadhaaba xidh baan tognahay Markii Inglan looga yeedhay,